Blogs: How to PrepareaProject Proposal?? आयोजना प्रस्तावना पत्र कसरी लेख्ने?
How to PrepareaProject Proposal?? आयोजना प्रस्तावना पत्र कसरी लेख्ने?
धेरै साथीहरू मलाई आयोजना प्रस्तावना पत्र (प्रोजेक्ट प्रपोजल) लेखिदिनु पर्यो अथवा प्रपोजल लेख्न सिकाई दिनु पर्यो भनी सम्पर्क राख्नु हुन्छ । प्रोजेक्ट प्रपोजल लेख्नु त्यति सजिलो हुन्न, विज्ञहरूको एउटा टिम बनाएर विस्तृत रूपमा स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालाहरूसँग धेरैपटक छलफल गरेपछि बल्ल प्रोजेक्ट तयाए हुन्छ । यसैले लागि हामी प्रोजेक्टको किसिम, आवश्यक विज्ञहरूको योगदान र लागतको आधारमा एक निश्चित शुल्क लिन्छौं जुन साधारण कृषक वा सानो संस्थाको लागि निकै ठूलै रकम पनि हुनसक्छ ।
अचेल दातृ संस्थाहरू पनि निकै बाढा भैसकेका छन्, धेरै जसो व्यक्ति वा संस्थाहरू केही डलर पाइहालिन्छ कि भनि विभिन्न हतकन्डा अपनाउँछन् । एउटा कन्सलट््यान्टले लेखेको प्रपोजल केवल डलर झार्नका लागि लेखिएको हो भन्ने बुझ्न उनीहरूलाई केही गारो हुन्न । फेरि धेरैजसो दातृ निकायले सहयोगको चाहना गर्ने संघसंस्थाले आफैले आफ्नै भाषामा प्रपोजल लेखोस् भन्ने चाहना राख्छन् । त्यसैले साथीहरू हो तपाईले आफ्नोलागि आफै प्रपोजल लेख्नु राम्रो हुन्छ । (तर नेपाली पाराले कुनै राजनीतिक नेता वा भ्रष्ट कर्मचारीको सिफारिमा प्रोजेक्ट हात पार्नु बेग्लै कुरा हो) ।
मैले यस लेखमा साधारणतया एउटा प्रपोजलमा के के जानकारीहरू समावेस गरिन्छ त्यसको खाका दिएको छुँ । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सबैले प्रयोग गर्ने सबै खाले प्रपोजलको खाका करिब करिब उस्तै उस्तै हुन्छन् अलि विस्तृत जानकारीका लागि सबै पक्षहरूको विश्लेषण गरेर यसका सबल, दुर्वल पक्षको व्याख्या गरिएको हुन्छ ।
How to PrepareaProject Proposal/ आयोजना प्रस्तावना पत्र कसरी लेख्ने?
Project Title: आयोजनाको नामः
• उद्देश्य अनुरुप छोटो र सुहाउँदो नाम राख्ने
Project Leader, Address and contact number आयोजनाको मुख्य व्यक्ति, ठेगाना, फोन नम्बरः
• आयोजनाको उद्देश्य र कार्यक्रम अनुरुप योग्यता भएको व्यक्तिलाई आयोजनाको प्रमुख बनाउनु पर्छ र सम्पर्क ठेगाना फोन, इमेल साथ उल्लेख गर्नुपर्छ ।
Implementing organization आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था
• आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थाको छोटो चिनारी, पृष्टभुमी, स्थापना, उद्देश्य र विगतमा भए गरेका कार्यक्रमहरू, आयव्यय तथा लेखा परीक्षणको रिपोर्ट आदि उल्लेख गर्नुपर्छ । यदि अरू सहयोगी संस्था छन् भने तिनीहरूको नाम, योगदानको विवरण दिनुपर्छ ।
Project Background and Justification: आयोजनाको पृष्टभुमी तथा औचित्य
• प्रस्तावना पत्रमा पेश गरेको आयोजना सम्बन्धी जानकारी, सो को महत्व, विगतमा अन्य निकायले भए गरेका कामको विवण । हाल प्रस्ताव गरेको आयोजनको महत्व, यसको कार्यान्वयनबाट हुने लाभ, उपलब्धि, आयोजनको आवश्यकता आदि उल्लेख गर्नुपर्छ ।
Project Objectives: आयोजनाको उद्देश्य
• आयोजनाको लक्ष के हो, यसले के के उद्देश्य लिएका छन्ः सो को बुदाँगत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
Project Outputs: आयोजनाको प्रतिफल
• आयोजना पुरा भए पछि यसबाट के के प्रतिफल के कति मात्रामा प्राप्त हुन्छ ः सो को बुदाँगत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
Proposed Programs: आयोजनाका कार्यक्रम
• आयोजनामा प्रस्ताव गरिएका लक्ष र प्रतिफल पुरा गर्न के के कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, कसरी गर्ने, कति गर्ने कुन समयमा गर्ने आदि विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
Methodology: कार्यान्वयन तरिका
• आयोजनामा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, के रणनीति अपनाउने? कुन समयमा गर्ने? कहाँ गर्ने? कसले गर्ने? के के स्रोत साधन चाहिन्छ? आदि विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । सञ्चालित कार्यक्रमको मूल्याङ्कन के कसरी गर्ने? प्राप्त उपलधिलाई कसरी अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्ने आदिको विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ ।
Project Area: आयोजनाको कार्यक्षेत्र
• आयोजना कुन क्षेत्र, जिल्ला गाउँ, टोलमा कार्यान्वयन गर्ने सो को विवरण विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
Project Period: आयोजनाको अवधि
• आयोजनाको कार्यान्वयन के कति वर्षका लागि कहिले देखि कुन अवधिसम्म गर्ने सो को ववरण विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
Beneficiaries: आयोजनाबाट लाभान्वित परिवार
• आयोजना बाट के कति परिवार प्रत्यक्ष तथा के कति परिवार, सामाजिक वर्ग लाभान्वित हुन्छन सो को विवरण विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
Sustainability of the Project: आयोजनाको दिगोपन
• आयोजनाको अवधि सकिए पछि आयोजना के कसरी दीगो रहिरहन्छ सो को विवरण विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
Project Logical Frameworks: आयोजना कार्यान्वयनको सोंच तालिका
• आयोजनाको सम्पूर्ण विवरण एउटै तालिका बाट देखिने गरी एक सोंच तालिका वा तर्कयुक्त ढाँचामा प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।
Financial Summary : आयोजनाको वित्तिय साराशं
• आयोजना सञ्चालनमा के कति खर्च लाग्छ? के कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ? जनशक्तिमा कति खर्च? चाहिने सामाग्री, मेसिन औजार, बीउबिजन आदिमा लाग्ने खर्च? प्रशाशन, लेखा, यातायात, भाडा आदिमा लाग्ने खर्च÷रकमको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।
Other relevant information: अन्य आवश्यक जानकारींः
• आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव, संभावित समस्या आदिको विवरण प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।